Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo" beta isivele ikhishiwe | Kusuka kuLinux
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kwaziwa ikhulula inguqulo ye-beta ye- Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo", ngemuva kokwakheka kwesisekelo sephakeji esabanda ngokuphelele futhi onjiniyela baqhubekela ezivivinyweni zokugcina nokulungiswa kwamaphutha.
Kule beta sesivele singathola uhlelo ngezinhlelo zokusebenza ezintsha ze-GNOME 40, kanye nokufakwa kweLinux Kernel 5.11, ukuthuthuka kweWayland nokuningi.
1 Yini esingayithola kunguqulo ye-beta ye-Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo"?
2 Landa bese uthola i-Ubuntu 21.04 beta
Yini esingayithola kunguqulo ye-beta ye-Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo"?
Kule beta nakuhlobo oluzinzile lwe-Ubuntu 21.04 I-GTK3 ne-GNOME Shell 3.38 ziyaqhubeka nokuthunyelwa njengezinguqulo ezizenzakalelayo, kepha izinhlelo zokusebenza ze-GNOME zivunyelaniswa kakhulu ne-GNOME 40 (ukuguqulwa kwedeskithophu kuya ku-GTK 4 naku-GNOME 40 kubhekwa ngaphambi kwesikhathi).
Futhi, ngokuzenzakalela iseshini esekwe kuphrothokholi yeWayland inikwe amandla Lapho usebenzisa abashayeli be-NVIDIA abaphethe, ngokuzenzakalela, njengakuqala, kunikezwa iseshini esekwe kuseva ye-X, kepha kokunye ukucushwa lesi seshini sidluliselwa esigabeni sezinketho.
Kuyaziwa ukuthi imikhawulo eminingi yeseshini ye-GNOME eWayland isusiwe muva nje, ezikhonjwe njengezinkinga ezivimbela ukuguqukela e-Wayland. Isibonelo, manje kungenzeka ukuthi wabelane nge-desktop usebenzisa i-Pipewire media server.
Olunye ushintsho esingaluthola ukuthi ungeze ukusekelwa kwePipewire Media Server ukunika amandla ukurekhoda kwesikrini, ukuthuthukisa ukusekelwa komsindo kuzinhlelo zokusebenza ze-sandbox, ukuhlinzeka ngamakhono wokucubungula umsindo, ukuqeda ukuhlukaniswa, nokuhlanganisa ingqalasizinda yomsindo yezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene.
Ngesikhathi imodeli yokufinyelela kwizikhombisi-ndlela zasekhaya zomsebenzisi ohlelweni ishintshile, njengoba izinkomba zasekhaya sezenziwe ngezimvume ezingama-750, ezinikeza ukufinyelela enkombeni kuphela kumnikazi namalungu eqembu. Ngezizathu zomlando, izinkomba zasekhaya zabasebenzisi be-Ubuntu zenziwe ngaphambilini ngezimvume ezingama-755, okuvumela umsebenzisi oyedwa ukuthi abuke okuqukethwe komkhombandlela womunye umuntu.
I-Linux kernel ibuyekezelwe enguqulweni 5.11, okubandakanya ukusekelwa kwamakhompiyutha we-Intel SGX, indlela entsha yokubamba izingcingo zesistimu, ibhasi elisizayo elibonakalayo, elivimbela ukuhlangana kwamamojula ngaphandle kweMODULE_LICENSE (), ukuhlunga ngokushesha izingcingo zohlelo ku-seccomp, ukunqanyulwa kokusekelwa kwezakhiwo ze-ia64, ukudluliswa kusuka kubuchwepheshe be-WiMAX ukwenza "isiteji" segatsha, amandla okufaka i-SCTP ku-UDP.
I- ukuhlanganiswa okuthuthukile ne-Active Directory kanye nokukwazi ukufinyelela ku-Active Directory nge-GPO (Group Policy Object) ukwesekwa ngokushesha ngemuva kokufakwa.
Ngokuzenzakalelayo, isihlungi sephakethe nftables inikwe amandla, noma kunjalo ukugcina ukuhambisana okubuyela emuva, iphtables-nft iphakethe iyatholakala, enikezela ngezinsiza ngomugqa ofanayo womugqa womyalo njengakuma-iptables, kepha ihumusha imithetho ephumela kwi-nf_tables bytecode.
Mayelana nephakethe lohlelo, singathola izinhlobo ezivuselelwe ze- izinhlelo zokusebenza nezinhlelo ezingaphansi, kufaka phakathi iPulseAudio 14, BlueZ 5.56, NetworkManager 1.30, Firefox 87, LibreOffice 7.1.2-rc2, Thunderbird 78.8.1, Darktable 3.4.1, Inkscape 1.0.2, Scribus 1.5.6.1, OBS 26.1. 2, i-KDEnlive 20.12.3, iBlender 2.83.5, iKrita 4.4.3, i-GIMP 2.10.22.
Kungezwe ukusekelwa kokufakazelwa ubuqiniso kwekhadi le-smart (kusetshenziswa pam_sss 7)
I-Intallator ingeze ukusekelwa kokwakha okhiye bokugcina ukubuyisela ukufinyelela kumahlukanisi abetheliwe
Amandla wokuhambisa izinsiza kusuka kuzinhlelo zokusebenza usebenzisa ukuhudula nokudonsa kungezwe kudeskithophu.
Kuzilungiselelo, manje usungashintsha iphrofayili yokusebenzisa amandla.
Kungezwe ukusekelwa kwe-GPIO ku-Raspberry Pi eyakhayo (nge-libgpiod ne-liblgpio).
I-Compute Module 4 board manje isekela i-Wi-Fi ne-Bluetooth.
Futhi, ICanonical yamemezela ukuqala kwe- vivinya ukwakhiwa okukhethekile kwe- Ukubuka kuqala Ubuntu Ubuntu Community ukudala izindawo zeLinux kuWindows, kusetshenziswa isistimu esezansi ye-WSL2 (Windows Subsystem for Linux), eyenza amafayela we-Linux asebenze ku-Windows.
Landa bese uthola i-Ubuntu 21.04 beta
Ekugcineni, kulabo abafuna ukulanda nokufaka le nguqulo ye-beta ye-Ubuntu kumakhompyutha abo noma bakwazi ukuyivivinya ngomshini obonakalayo, Kufanele balande isithombe sesistimu kuwebhusayithi esemthethweni yohlelo.
Ekugcineni, kufanelekile ukusho ukuthi ukwethulwa kuhlelelwe u-Ephreli 22.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » Ubuntu 21.04 beta manje ikhishwe i- "Hirsute Hippo"